Cappadocia Balloon Tour - Mitengo, Kubuda kwezuva, Muripo
Kapadokia Horse Riding
2 June 2022 10 May 2022 Munyori: vakasununguka
Iwe unogona kuona yakadzama mamiriro enhau uye yakanyanya rugare mamiriro ezvisikwa muKapadhokiya. tenderera mumipata Nekuita izvi, iwe unoravira runyararo uye unopupurira maonero akanaka kwazvo. Nharaunda yeKapadhokiya iri mubvunzo ndeyechishongo chenhoroondo chine zvese. Paunoenda nekushanya, unozoda kushanya zvakare uye zvakare uye ugopupurira zvawakamboona. Icho chokwadi chekuti inotarisana nezviitiko zvakawanda zvenhoroondo ine maitiro ekugadzirisa emamiriyoni makumi matanhatu ichasiya pfungwa huru pauri. Musha kune budiriro zhinji nehumambo, dunhu iri rizere nehupfumi hunobva kuvaHiti kusvika kumaOttoman. Pane nhanho imwe neimwe yaunotora, iwe uchasangana neakasara kana artifact yemagariro uye empires ari mubvunzo. Kushanya kwemupata uye kushanya kwenhoroondo kwakarongwawo pano. Kune zvakare kushanya uye zviitiko zveavo vanoda adventure uye vanoda kuve nechiitiko chakasiyana. Kune avo imi vasati vamboona kupisa kwemhepo kubharumu kare, iyo Cappadocia Balloon Tour ndiyo yakanakira sarudzo.
Iko kufara kwakasiyana kusiya zvese kumashure uye kujoinha nzendo dzakarongwa nemhepo inopisa, iyo yave chiratidzo cheKapadhokiya. Paunoshanyira nharaunda yeKapadhokiya, iri pamusoro pekushanya kwaunofanira kuita kana kubatana kuti uve nenguva yakanaka. Nokuti kana vazhinji vedu tichifunga nezveKapadhokiya, chinhu chokutanga chinouya mupfungwa chimuni chemufeya nemabharumu emhepo inopisa.
Chii chinonzi Cappadocia Balloon Tour?
Rwendo urwu runovavarira kuita kuti uve nenguva inofadza. Kutenda kumabharumu emhepo inopisa, unogona kuva nendege yakanaka muKapadhokiya. Iwe unogona kutarisa makona ese uye ese anoyevedza eKapadhokiya kubva kudenga uye kuva nenguva yakanaka nemumwe wako uye shamwari uye kuunganidza zvisingakanganwiki ndangariro. Paunoshanyira dunhu reKapadhokiya, kushanya kwebharumu kuri pamusoro pemazita ezvinofanira kuita munzvimbo ino.
Kapadhokiya balloon cruise tour, Kapadhokiya bhiza rinotasva bhiza, Kapadhokiya bhiza rwendo, Kapadhokiya bhiza rinotasva bhiza, Kapadhokiya balloon watching tour
Chii chinonzi Hot Air Balloons?
Zvingave zvakarurama kutaura ndege kune mabharumu emhepo inopisa ari kutaurwa. Vanoshanda nechiedza-kupfuura-mhepo gasi kana nekuzadza nemhepo inopisa. Iyo zvakare mota yakagadzirwa nehama Etienne naJoseph Montogolfier. Kunyange zvazvo zvichiita sezviri nyore kubhururutsa mabharumu aya, pane zvimwe zvinonetsa. Rimwe rematambudziko aya kutungamira chibharumu chemhepo inopisa. Iwe haugone kuwana mukana wekuenda kurudyi kana kuruboshwe maererano nekuda kwako. Nekuti mabharumu emhepo inopisa anongofamba wakatwasuka kumusoro. Paunosimuka wakananga kudenga, mhepo inosarudza kwauchaenda, kwete iwe. Chero nzira iri kuvhuvhuta nayo mhepo, uchatsveta wakananga ikoko.
Ndezvipi Zvikamu zveHot Air Balloons?
Mabharumu emhepo anopisa ane zvikamu zvakati wandei. Chekutanga, ine dome rakagadzirwa nenylon, isingacheme uye yakareruka zvinhu. Tinogona kutaura kuti chikamu ichi ndicho chikamu chakakosha chebharumu. Mune mamwe mazwi, inogadzira iyo bubble pachayo. Mushure mezvo, tswanda inouya yechipiri. Dengu iri rakagadzirwa newicker. Ndeyekutakura vafambi uye mutyairi wendege. Mushure maizvozvo, 'burner' ndicho chikamu chinoshandiswa kubhururuka mhepo inopisa. Izvi zviri pamusoro pemisoro yevafambi. Inoburitsa murazvo wakasimba mukati kudziya mhepo. Kutenda kune chinopisa, chibharumu chemhepo inopisa chinotanga kubhururuka.
Ndege Inotora Nguva Yakadii?
Kunze kwekugadzirira mabharuni emhepo inopisa uye inflation inotonhora, kungobhururuka chete kunopindirana nenguva ye1 awa. Saizvozvovo, kufuridza bharumu kunoitwa nemutyairi wendege nevashandi vepasi. Bharumu inogadzirira kubhururuka mukati memaminitsi angangoita makumi matatu. Kuunganidzwa kwebharumu mushure mekubhururuka kunoitwa nemutyairi uye vashandi vepasi. Mabharumu emhepo inopisa anongoitika mumaawa ekutanga ekubuda kwezuva. Izvi zvinodaro nekuti mabharumu anoda mweya wakadzikama. Ndiko kuti, simba uye nzira yemhepo inokosha zvikuru. Ndege yakagadzikana uye yakagadzikana inopiwa panguva dzino dzezuva. Panguva imwecheteyo, mamiriro ekunze akakosha zvikuru kuitira kuti uve nechokwadi chekumhara munyoro nesimba guru rekusimudza.
Mangani Maawa Anotora Cappadocia Balloon Ride?
Mabharuni emhepo inopisa zvimwe chimwe chezviratidzo zvakakosha zveKapadhokiya. Maonero akasikwa akatenderedza chimneys pamusoro peKapadhokiya ndiyo mhando yausingakwanise kutarisa zvakakwana. Inoratidza panorama inonakidza uye ine runyararo ine mabharumu ekuona. Asi kunze kwezvose izvi, zvichave zvinonakidza kuona mabharuni aya pamusoro peKapadhokiya. Ungada kutarisana nemamiriro ezvinhu asingatarisirwi. Semuenzaniso, kutora chikamu mukushanya kwebharumu. Iyo bharumu tour inopa mukana wekupinda pamhepo inopisa mabharuni uye tarisa maonero eKapadhokiya kubva pamamita pamusoro pevhu. Unogona kuona runako rwakasiyana rweKapadhokiya.
Iwe unozoona kugadzikana kwechisikigo kwemipata, iyo yakasarudzika runako rwechimneys uye zvimwe kubva kumabharumu uye unopupurira chiitiko chausina kumboravira kare. Ko Cappadocia Balloon Tour inotora maawa mangani? Rwendo urwu harungovharidzi chibharumu chinobhururuka chete. Nekudaro, mamwe masevhisi anowanikwawo kwauri. Rwendo rwakarongwa nekufambisa kwehotera, kugadzirira kwebharumu kutiza, nguva yekubhururuka uye kupemberera mushure mekubhururuka. Rwendo rwakagadzirirwa apo iwe unogona kuwana zvinhu zvose zvakakwana pasina kumhanyira, sekutaura, pasina kuisa tsoka dzako shangu. Rwendo, kwaunogona kunakidzwa nezvinhu zvose nenzira yakanakisisa, inopararira pamusoro penguva yemaawa 3-4 nezvose zviri pamusoro apa. Saizvozvowo, ruzivo rwako rwekuyangarara mudenga nemhepo inopisa bharumu inopararira mukati menguva yeawa imwe.
Kapadhokiya chibharumu tour
Cappadocia Balloon Tour Mutengo
Kushanya kwebharumu muKapadhokiya kwakanakira ruzivo rwepamusoro. Zvinokukonzeresa kuti uone panorama inoyevedza yedunhu reKapadhokiya uye kuti unzwe aura yayo yakasiyana. Munhu wese anekodzero yekuona nekuona tsvarakadenga idzi dzedunhu reKapadhokiya, iro rizere nematombo anokosha, kubva kudenga. Ndosaka tichikuudza nzendo dzakanakisa. Iyo Cappadocia Balloon Tour, kune rumwe rutivi, rwendo rwunofarirwa uye rwunopindwa neanenge vashanyi vese vekumba nekune dzimwe nyika vanouya mudunhu iri. Tinokukoka iwe kuti ubatane nerwendo rwunonakidza. Ungangoda kujoina rwendo urwu asi unogona kusaziviswa nezve mutengo. Kana iwe uchida kuziviswa nezvemitengo yekushanya kwebharumu, tinogona kukuudza mutengo weavhareji. Hazvigoneke kuti tipe mutengo chaiwo nekuti mitengo inosiyana zvichienderana nemapakeji auchagamuchira. Nekuda kweizvozvo, kushanya kwebharumu kune mubhadharo we170 Euros.
Chii Chinosanganisirwa muKapadhokiya Balloon Tour?
Pachave neavo vari kushamisika kuti mutengo unosanganisira kushanya kwebharumu iwe uchabatana mudunhu reKapadhokiya. Tine zvakawanda zvekutaura pamusoro peizvi zvakare. Chekutanga, iyo Cappadocia Balloon Tour haingobatanidzi kubhururuka kwebharumu, sezvinofunga vamwe vanhu. Kunze kweizvi, kune akakosha masevhisi ako. Mumamiriro ezvinhu aya, zvakakosha kuti ugamuchire sevhisi yakanakisa uye unakirwe. Naizvozvo, haisanganisi chete kubhururuka nebharumu, asiwo akawanda akasiyana masevhisi. Saka ndeapi masevhisi aya uye chii chinosanganisirwa mumutengo?
Chokutanga pane zvose, zvinobatsira kuwedzera: Cappadocia Balloon Tour irwendo runotora maawa 3-4 nekuomerera kune imwe chirongwa. Tichazokurukurawo nezvechirongwa ichi zvakadzama gare gare. Pane kuchinjirwa kwauri. Basa rekutorwa kubva kuhotera yauri kugara uchienda kunzvimbo yebharumu yekubhururuka inosanganisirwa mukushanya uku. Kunze kweizvozvo, iwe uchapihwa chitupa chebharumu. Panguva imwecheteyo, ichaenderera mberi nechikamu chekutasva bharumu uye kutarisa maonero akasiyana eKapadhokiya kubva kudenga. Hapana anoda kuti tsaona iitike kwauri panguva iyi. Naizvozvo, inishuwarenzi yendege ichapihwa kwauri. Rwendo ruchapera nechampagne isiri-doro ipapo.
Maonero eMupata uye Fairy Chimneys
Non-Alcoholic Champagne Refreshment
Balloon tour ishanyo yakarongwa muKapadhokiya ine chinangwa chekuva nenguva inofadza. Nekudaro, kana ukajoinha rwendo urwu, haungokwanisi chete kukwira mudenga nebharumu. Inobva pane imwe purogiramu. Masevhisi mazhinji anosanganisirwawo musangano iri. Nzira yekutanga yeKapadocia Balloon Tour ichatanga nekukutora kubva kuhotera yako. Iwe unozofanirwa kugadzirira kushanya uku nekukurumidza, sezvo bharumu kushanya kunorongwa mumaawa ekutanga emangwanani kusati kwaedza. Mushure mokukutora kubva kuhotera, tichakuendesa kunzvimbo iyo ndege dzebharuni dzinoitwa. Chekutanga, vatyairi vedu vachakuzivisa nezve ndege munharaunda yaunosvika. Ichakuudza zvaunofanira kuita uye zvaunofanira kudzivisa panguva yekubhururuka, kureva, zvausingafaniri kuita. Panguva imwecheteyo, iwe uchapihwa chitupa chebharumu chaunogona kuchengeta kwehupenyu hwako hwese uye chinokufadza iwe sechiyeuchidzo. Nekuda kwechitupa ichi, haufe wakakanganwa chiitiko chawaive nacho uye chicharamba chiri chiyeuchidzo chinoshamisa kwauri.
Mukuita uku, iwe unozoonawo kuti mabharumu anogadzirirwa sei kutiza. Usati wava nechiitiko ichi, uchaona zviri kuitika kumashure, gadziriro.
Mushure meizvozvo, iwe unoenda kune iyo inonyanya kufadza chikamu. Nemamwe mashoko, ichiyangarara mumatenga eKapadhokiya nemabharumu. Kuve nemamita akati wandei pamusoro pevhu nebharumu kunonakidza. Kubva pano iwe uchaona runako rwese rwedunhu reKapadhokiya. Mipata uye chimneys muKapadhokiya zvinogadzira maonero akanaka kwazvo kwauri. Kana kubuda kwezuva kuchiwedzerwa kune zvese izvi runako, panorama iri pamberi pako inosvika padanho rekuti mazwi anenge asina kukwana. Zvichakutorera ingangoita awa kuti uteedzere pamusoro pematenga eKapadhokiya. Pakupera kweawa, mabharumu achaburuka zvishoma nezvishoma pasi zvakare.
Asi masevhisi haana kuganhurirwa kune iwawa. Paunosvika kumagumo ekushanya kwebharumu, kushamisika kwakasiyana kuchasangana newe. Vachakushandira iwe isiri-doro champagne. Nokudaro, iwe uchakwanisa kupemberera chiitiko ichi chakasiyana chawaive nacho muKapadhokiya uye unakidzwe nekuve pamwe nevadiwa vako. Paunosvika kumhedziso, basa rakanakisisa richapiwa kwauri richava ndangariro yakaisvonaka isingakanganwiki.
Ko Cappadocia Balloon Tour Yakachengeteka?
Imi mese munoda kuunganidza zvisingakanganwiki ndangariro dzinonakidza neshamwari dzako, mukadzi, shamwari. Kunyanya kana ndangariro idzi dziri mudunhu reKapadhokiya, hadzidyike. Iwe unoda kuita zvinhu zvinonakidza pamwe chete, shanyira Kapadhokiya uye udzidze nezvenhoroondo yayo. Kunze kweizvi zvese, vanhu vazhinji vanotora chikamu muzviitwa kana kushanya kwakarongwa mumatunhu aya. Chinangwa cheizvi ndechekudzidza zvakawanda mune zvese uye kutenderera dunhu nemazvo nekutevera imwe chirongwa. The Kapadhokiya Balloon Tour inokubvumira kuona Kapadhokiya kubva akasiyana maonero. Kushanya kwebharumu, kwaunonzwa wakasununguka seshiri, kuchawedzera kunakidzwa kwako. Asi vanhu vazhinji vanosarudza kungwarira zvakanyanya pane dzimwe nyaya. Kunyange zvazvo vachida adventure, vanoda kunzwa vakachengeteka. Saka, imwe yemibvunzo inonyanya kuda kuziva nezveKapadhokiya Balloon Tour inomuka. Ko Cappadocia Balloon Tour yakachengeteka here?
Chinangwa ndechekukuvaraidza iwe, kugonesa iwe kuunganidza zvakanaka ndangariro. Pane kudaro, hatimbodi kukuisa mumamiriro ezvinhu ane ngozi. Iyo Cappadocia Balloon Tour nderimwe renzendo dzine chinangwa chekukuvaraidza iwe. Sezvatakambotaura, inishuwarenzi yendege inopihwa kwauri usati wajoina kushanya. Nenzira iyi, iwe uchadzivirirwa kubva kunjodzi diki. Kunze kwezvose izvi, kune mamwe mabasa anowira pauri kuitira kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwekushanya. Rimwe remabasa aya nderekuteerera zvaunoudzwa nemutyairi webharumu remhepo inopisa. Kunyatsoteerera zvaunofanira kuita uri mudenga. Tinokurudzira kuti usapfuure zvataurwa nemutyairi wendege. Zvikasadaro, unogona kuona kukuvara kudiki. Asi kune rumwe rutivi, kana ukatevera zvinotaurwa nomutyairi kutsamba yacho, hapana ngozi. Saizvozvo, iwe unenge wapedza nekubudirira kushanya kwakachengeteka uye kunonakidza pasina kukuvara. Nekuda kweizvozvo, iyo Cappadocia Balloon Tour haisi rwendo rune njodzi. Sezviri pachena, iyi mamiriro ezvinhu inotsamira zvishoma pane yako yekutanga uye kutarisa.
Ndiani Anogona Kutora Chikamu muKapadocia Balloon Tour uye Ndiani Asingagone?
Iwe unogona kuve mumwe munhu anoda kujoinha bharumu kushanya uye kuona chimwe chinhu chausina kumbobvira waona. Zvisinei, unogona kunge usina chokwadi kana uchikwanisa kutora chikamu murwendo urwu. Mamiriro ekutora chikamu mukushanya kwebharumu anenge asipo. Asi panguva ino, hongu, tinokurudzira kuti vamwe vanhu vasabvumirane. Mumwe wavo vanhu vanotya nzvimbo dzakakwirira. Kana iwe uri munhu anotya nzvimbo dzakakwirira, tinokurudzira kuti usatora chikamu chehutano hwako. Nekudaro, kana iwe uine kutya kwekuvhunduka, isu tinogona kuona kushanya kwebharumu sekushanya kune mukana wakakura wekuva nenjodzi kwauri zvakare. Nekuti kana kurwisa kwako kwekutya kunobata uku bharumu iri mudenga, zvichave zvakaoma kupindira. Ngatiise parutivi kutya kwekutya uye kutya kwepamusoro uye kutarisa mamiriro acho kubva kune imwe kona. Hazvina kukodzera kuti vana vatore chikamu munzendo dzebharumu. Rwendo urwu rwakakodzera vanhu vakuru. Zvinosuruvarisa, hazvibviri kutaura kuti yakakodzera vana. Saka Kapadhokiya Balloon Tour; Tinogona kutaura kuti hazvina kukodzera vana, vanhu vane kutya kwekutya uye kutya kwepamusoro.
Mumwaka upi uye panguva ipi iyo Cappadocia Balloon Tour inoitwa?
Tinofanira kutanga mutsara tichitaura kuti hapana nguva uye mwaka yekuunganidza nguva dzakanaka. Naizvozvo, iyo Cappadocia Balloon Tour inorongwa mwaka wega wega. Inoitwawo mazuva 365 pagore. Nekuti unokumbirwa kuti utarise maonero akanaka ayo Kapadhokiya anoratidza mumwaka wega wega uye kupupurira nguva idzi. Uri mumatenga, unogona kuona runako rweKapadhokiya rwakapfeka muchirimo. Kurira kweshiri, nounyoro hwomumipata, zvichakuroya zvokudenga; Pane zvakasiyana, zvinobatsira kufunga nezvemwedzi yechando. Saizvozvowo, unogona kuona chando chakafukidza Kapadhokia sejira jena rinobva kudenga. Nekuchena kwechimneys, chokwadi chekuti Kapadhokiya yose yakafukidzwa nechando inokubvumira kupupurira maonero anozorodza maziso ako. Kuti urege kukunyima zvese izvi zvinoyevedza, mabhoti kushanya kunorongwa zuva rega rega regore, mwaka wega wega.
Ngatitarisei wachi kubva kune rimwe divi. Saka, inguva dzipi iyo Cappadocia Balloon Tour inoitwa? Sezvatakambotaura, kushanya kwedu kwebharuni kunoitwa zuva risati rabuda mangwanani. Chikonzero cheizvi ndechokuti mhepo inodzikama mumaawa emangwanani. Nokudaro, kubhururuka kwebharumu kunova nyore. Panguva imwecheteyo, zvakakosha pakuita nyoro kumhara yakananga pasi mushure mekunge ndege yapera. Asi kunze kwezvose izvi, chinonyanya kukosha ndechekuona kubuda kwezuva kubva kudenga. yemwaranzi yezuva kumipata yeKapadhokiakurova chimneys kunogadzira nzvimbo yakasiyana zvachose.
Ko Cappadocia Balloon Tour Inotangira kupi?
Kushanya kwebharumu muKapadhokiya kazhinji kunogadzirwa kubva kuGöreme. Mabharumu eKapadhokiya kubva kwaGoreme Inofamba ichisvika kudenga. Dunhu reKapadhokiya nderimwe rematunhu anofanirwa kushanyirwa nekuonekwa kubva kumakona ese. Naizvozvo, kune avo vari kugadzirira runyoro rwenzvimbo dzekushanyira, zvinokurudzirwa kuisa Kapadhokiya mune iyo runyorwa. Nekudaro, isu tinokurudzira kuti avo vanomira neKapadhokiya uye vasingakwanise kusarudza rwendo rwekujoinha, wedzera iyo Kapadhokiya Balloon Tour kune yavo runyorwa.
Categories Balloon Tour, Kapadhokiya, Kapadhokiya Mabasa, Cappadocia Balloon Tour zvinyorwa chiitiko, ruzivo, varaidzo, Kapadhokiya, cappadocia tours, adventure, hot-air baloon
Comment kukanzura mhinduro
Sevha zita rangu, email uye kero yewebhusaiti mune ino browser kune inotevera nguva ini yandinotaura.
Iko hakuna makomendi ekuratidza.
© 2022 • Yakavakwa ne GeneratePress